Ndi Jeremiah ama enen ke ndidọhọ ke idụhe n̄kpọ emi ọsọn̄de akan Abasi?
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 28, 2020 Septemba 28, 2020
Nwanyị nwere ifuru odo na aka ya Sunday 27 Septemba 2020
“Abụ m Jehova, Chineke nke mmadụ niile. Onwere ihe sirikarịrị m ike? "(Jeremaya 32:27).
Amaokwu a na-ewebata ndị na-agụ ya isiokwu ole na ole dị mkpa. Nke mbụ, Chineke bụ Chineke n’elu mmadụ niile. Nke a pụtara na anyị enweghị ike itinye chi ọ bụla ma ọ bụ arụsị n’iru ya ma fee ya ofufe. Nke abuo, o juo ma onwere ihe siri ike nye ya. Nke a na-egosi mba, ọ dịghị ihe.
Ma nke ahụ nwere ike ime ka ndị na-agụ ya laghachi na nkuzi ihe omimi ha nke 101 ebe onye prọfesọ jụrụ, "Chineke ọ nwere ike ime ka nnukwu okwute buru ibu nke na ọ nweghị ike imegharị?" Chineke Nwere Ike Ime Ihe Niile? Gịnị ka Chineke kwuru n’amaokwu a?
Anyị ga-abanye n'ime amaokwu a na ihe amaokwu a pụtara ma gbalịa ikpughe ajụjụ oge ochie: Chineke ọ nwere ike ime ihe ọ bụla?
Onye-nwe-anyị na-agwa Jeremaịa onye-amụma okwu n’amaokwu a. N’oge na-adịghị anya, anyị ga-atụle nkọwa ka ukwuu nke ihe mere na Jeremaịa 32, gụnyere ndị Babilọn weghaara Jerusalem.
Dabere na John Gill's Commentary, Chineke kwuru okwu amaokwu a dị ka nkasi obi na ihe ejiri n'aka n'oge ọgba aghara.
Nsụgharị ndị ọzọ nke amaokwu ahụ, dị ka nsụgharị Syriac, na-egosikwa na ọ dịghị ihe ọ bụla pụrụ igbochi amụma Chineke ma ọ bụ ihe ọ na-achọ imezu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ dịghị ihe pụrụ igbochi atụmatụ Chineke .Ọ bụrụ na ọ bu n'obi ka ihe mee, ọ ga-eme.
Anyị kwesịkwara iburu n'uche ndụ na ọnwụnwa nke Jeremaya, mgbe mgbe, ọ bụ onye amụma nke naanị ya nọ n'okwukwe na okwukwe ya. N’amaokwu ndị a, Chineke mesiri ya obi ike na Jeremaịa pụrụ inwe ntụkwasị obi zuru ezu n’ebe ọ nọ nakwa na okwukwe ya abụghị nke efu.
Ma gịnị mere na Jeremaịa 32 n'ozuzu ya na ọ ga-agakwuru Chineke n'ekpere na arịrịọ siri ike?
Gịnị na-eme na Jeremaya 32?
Israel meriri nke ukwu, na oge ikpeazu. N’oge na-adịghị anya ndị Babịlọn ga-emeri ha ma dọrọ ha n’agha ruo afọ iri asaa n’ihi ekweghị ekwe ha, agụụ ihe ọjọọ ha na-enwe maka chi ndị ọzọ, na ntụkwasị obi ha nwere na mba ndị ọzọ dịka Ijipt karịa Chineke.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ụmụ Israel nwetara oke iwe nke Chineke, ikpe Chineke ebe a anaghị adịru mgbe ebighị ebi. Chineke gwara Jeremaya ka o wuo ubi iji gosi na ndị ahụ ga-alaghachi n’ala ha ọzọ ma weghachi ya. Chineke kwuru banyere ike ya n’amaokwu ndị a iji mesie ndị Izrel obi ike na ya bu n’obi na ọ ga-emezu atụmatụ ya.
Ndi ntụgharị na-emetụta ihe ọ pụtara?
Dị ka e kwuru na mbụ, nsụgharị Syriac mere ka a ghara ịmata ihe amaokwu ndị ahụ a ga-ekwu banyere amụma ndị ahụ pụtara. Oleekwanụ maka nsụgharị anyị ọgbara ọhụrụ? Ha niile dịgasị iche n’ihe ihe amaokwu a kwuru pụtara? Anyị ga-etinye nsụgharị amaokwu ise ama ama ama n'okpuru wee tụlee ha.
"Lee, abụ m Jehova, Chineke nke anụ arụ niile: ọ nwere ihe karịrị m ike?" (Mb)
“Abụ m Jehova, Chineke nke mmadụ niile. Onwere ihe sirikarịrị m ike? "(NIV)
“Lee, abụ m Chineke, Chineke nke anụ arụ nile; onwere ihe kariri m ike "(NRSV)
“Lee, abụ m Jehova, Chineke nke anụ arụ niile. Onwere ihe sirikarịrị m ike? "(ESV)
“Lee, Mụ onwe m bụ Jehova, Chineke nke anụ arụ niile; onwere ihe kariri m ike "(NASB)
O yiri ka nsụgharị niile nke amaokwu a ọgbara ọhụrụ yiri nke ha. "Anụ" na-echekarị mmadụ. E wezụga okwu ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha na-edekọ ibe ha mkpụrụ okwu. Ka anyị nyochaa Tanakh Hibru nke amaokwu a na Septuagint iji hụ ma anyị hụrụ esemokwu ọ bụla.
“Lee, abụ m Chineke, Chineke nke anụ arụ nile. Onwere ihe zoro m? "(Tanakh, Nevi'im, Yirmiyah)
"Abụ m Jehova, Chineke nke anụ ahụ niile: ihe ga-ezobe m!" Iri Asaa
Nsụgharị ndị a gbakwunyere nuance na ọ nweghị ihe ọ bụla nwere ike zonahụ Chineke. Ọ pụtara "ebube", "ebube" ma ọ bụ "oke siri ike nghọta". N’iburu nsụgharị nke okwu a n’uche, o yiri ka nsụgharị Bible nile kwenyere n’amaokwu a.
Chineke enwere ike ime ihe?
Ka anyị leba anya na mkparịta ụka ahụ na nkuzi Philosophy 101. Chineke enweghi oke na ihe O nwere ike ime? Na kedu ihe ikike niile pụtara?
Akwụkwọ Nsọ yiri ka ọ na-egosi ịdị ike nke Chineke (Abụ Ọma 115: 3, Jenesis 18: 4), mana nke a ọ pụtara na ọ nwere ike ịmepụta nkume nke ọ na-enweghị ike imegharị? Chineke ọ̀ pụrụ igbu onwe ya, dị ka ụfọdụ ndị prọfesọ nkà ihe ọmụma na-atụ aro ya?
Mgbe ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ dịka otu a, ọ ga-abụ na ha anaghịzi enwe ezi nkọwa nke ike niile.
Nke mbu, anyi aghaghi ichebara udiri nke Chineke echiche n’ihi na Chineke di nso ma dịkwa nma. Nke a pụtara na ọ pụghị ime ihe dịka ịgha ụgha ma ọ bụ ime “omume ọ bụla rụrụ arụ,” ka John M. Frame dere maka Njikọ Oziọma. Fọdụ ndị nwere ike ịrụ ụka na nke a bụ ihe megidere ikike niile. Ma, na-akọwa Roger Patterson maka Azịza na Jenesis, ọ bụrụ na Chineke gha ụgha, Chineke agaghị abụ Chineke.
Nke abuo, otu esi emesiri ajuju ndi nzuzu dika “Chineke puru ime okirikiri?” anyị kwesịrị ịghọta na ọ bụ Chineke kere iwu ndị na-achị ihe ndị dị n'eluigwe na ụwa. Mgbe anyị na-arịọ Chineke ka o kee nkume nke ọ na-agaghị ebuli ma ọ bụ okirikiri gburugburu, anyị na-arịọ ya ka ọ pụọ n’otu iwu ndị ahụ o guzobere n’eluigwe na ala.
Ọzọkwa, ịrịọ Chineke ka o mee ihe na-abụghị àgwà ya, tinyere okike nke ihe ndị na-emegiderịta onwe ha, yiri obere ihe ọchị.
Maka ndị nwere ike ịrụ ụka na o megiderịta onwe ya mgbe ọ rụchara ọrụ ebube, lelee edemede mmekorita Oziọma a iji luso echiche Hume banyere ọrụ ebube anya.
N’iburu nke a n’uche, anyị ghọtara na ike niile nke Chineke abụghị naanị ike n’eluigwe na ala, mana ike na-akwagide ụwa niile. Nime Ya ka ndu diri; Chineke na-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n'àgwà ya ma ghara ime ihe megidere ya. N'ihi na ọ bụrụ na o mee, ọ gaghị abụ Chineke.
Kedu ka anyị ga - esi tụkwasị Chineke obi n'agbanyeghị nnukwu nsogbu anyị?
Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi maka nnukwu nsogbu anyị n’ihi na anyị ma na Ọ karịrị ha. N’agbanyeghi ọnwụnwa ma ọ bụ ọnwụnwa ndị anyị na-eche ihu, anyị nwere ike itinye ha n’aka Chineke ma mara na O nwere atụmatụ maka anyị n’oge ụfụ, ọnwụ, ma ọ bụ nkụda mmụọ.
Site n'ike ya, Chineke mere anyị ebe nchekwa, ebe ewusiri ike.
Dika anyi mutara n’amaokwu nke Jeremaia, odighi ihe siri ike ma obu zoro ezo n’ebe Chineke no. Setan apughi icheputa uzo puru imebi uche Chineke obuna ndi mo ojo aghagh iju ajuju tutu ha eme ihe obula (Luk 22:31)
N’ezie, ọ bụrụ na Chineke nwere ike kasịnụ, anyị pụrụ ịtụkwasị ya obi ọbụna mgbe anyị nwere nsogbu ndị kasị sie ike.
Anyị na-efe Chineke pụrụ ime ihe nile
Dika anyi choputara na Jeremaia 32:27, ndi Israel choro ihe ha g’enwe olile anya ma nweekwa olile anya mgbe ndi Babilon ga emebi obodo ha ma duru ha n’agha. Chineke mesiri ma onye amụma ahụ ma ndị ya obi ike na ya ga-akpọghachi ha n’ala ha, ọbụnadị na ndị Babilọn enweghị ike ịgbanwe atụmatụ ya.
Ikike ime ihe nile, dika anyi choputara, putara na Chineke puru inwe ike kachasi elu ma kwado ihe nile di n’eluigwe na ala, mana ka odi n’eme ihe n’ime agwa ya. Ọ bụrụ na o megidere omume ya ma ọ bụ na-emegide onwe ya, ọ gaghị abụ Chineke.
N’otu aka ahụ, mgbe ndụ riri anyị ọnụ, anyị amata na anyị nwere Chukwu pụrụ ime ihe nile nke karịrị nsogbu anyị.
Nke gara aga Post Gara aga post:Pope Francis: Uzo nke idi nso choro agha nke mmuo
Next Post → Post ozo:My ụbọchị ọmụmụ: ekele m na ekele papa